लेभान्टे विरुद्ध रियलको ताण्डव, भिनिसियसको ह्याट्रिक !
यो सानदार जितसँगै च्याम्पियन बनिसकेको रियल म्याड्रिडको ४६ खेलबाट ८४ अंक पुगेको छ । पराजित लेभान्टे २९ अंक जोडेर पुछारमा रहेको छ । रयलसँगको हारले लेभान्टेलाई रेलिगेसनको दवाव बढेको छ । अब बाँकी दुई खेलमा सफलता हात पार्न नसके लेभान्टे रेलिगेसनमा पर्नेछ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख ३०, २०७९०६:२७
कसले जित्ला एफए कप ? खेल कुन च्यानलमा हेर्ने ?